Kutheni abantu bekhetha uSemalt
Abanye babanikazi bewebhusayithi bacinga ukuba ngoncedo lwezicatshulwa ezizodwa, iisayithi zabo ziya kufikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-injini yokukhangela. Bacinga ukuba amagama aphambili angayinyusa imbonakalo yewebhu, kwaye ke ngoko ikhefu elikhulu lisondele. Kukuphambuka okuncinci. Ukuba bekunje, bekungayi kubakho mfuneko yokuba neengcali ze-SEO ezinamava kunye namaziko okuphucula amandla e-SEO. Konke kuyinkimbinkimbi ngakumbi, kwaye ngaphandle kweengcali, ishishini lakho kwi-intanethi liya kukuzisela ukudana kuphela. Ngaphandle kwayo yonke into, uSemalt uyaqhubeka nokuphucula ukusebenza kwewebhusayithi ngaphezulu kweminyaka elishumi.
Amava amnandi ayivumela ukuba ijamelane nemisebenzi yokwanda kobunzima. USemalt usindise amakhulu eziza, ngokoqobo azikhupha enzonzobileni. Uvavanyo oluninzi lwabathengi luyaqinisekisa oku. Ngaphandle koko, unokujonga iimeko kwiwebhusayithi yethu, ezibonakalisa imizekelo yenyani yokuba zisebenza njani iindlela zethu. Ukuba uthathe isigqibo sokwakha ishishini elinobuzaza, indlela yakho kuphela yiSemalt. Kuphela sinokunceda abantu benze utyalomali olufanelekileyo. Ukuphumelela kwakho kuthetha impumelelo yethu, ke siyayazi indlela yokuphumelela.
Akusiyo imfihlo yokuba uSemalt uye wakhokela kwiwebhusayithi yokuphuculwa kwe-SEO. Ineqela elinamandla loochwephesha bokwenene abanokuwusingatha nawuphi na umsebenzi. Okokuqala, liqela leengcali ze-SEO ezikumgangatho wehlabathi. Kuya kufuneka sihlawule irhafu kubaphathi abaqeqeshiweyo, iingcali ze-IT, abathengisi. I-oyile yenkqubo yethu enamandla ye-Semalt inikezelwa ngabakhupheli abanetalente, abaqulunqi kunye nabahlalutyi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngamnye waba baqeqeshi unolwazi olukhulu lwe-SEO.
Ngamanye amagama, uSemalt unokuvezwa njengendlela elungelelaniswe kakuhle yokwenza iiwebhusayithi zisebenzise ubuchwepheshe be-SEO obunqamlezileyo. Ngoku iyacaca ukuba kutheni uSemalt engenabakhuphiswano abafanelekileyo kule ndawo. Ngapha koko, isikhundla sika-Semalt esikhokelayo sibambelele ngokuqinileyo kangangeminyaka. Namhlanje, phantse wonke umntu uyazi ukuba ngu-Semalt kuphela oqinisekisa impumelelo yokwenyani kwintsebenzo ye-SEO.
I-SEO okanye iNjini yokuKhangela ihlala isetyenziswa kakhulu kwi-lexicon phakathi kwabasebenzisi be-intanethi. Ngenxa yoko, ayinguye wonke umntu oyiqondayo intsingiselo yegama. Ngapha koko, bambalwa abantu abakuqondayo ukutolikwa kwayo. Siza kuvula ikhethini kwaye sichaze ukuba yintoni. Njengoko uyazi kakuhle, ii-injini zokukhangela zinika abasebenzisi uluhlu lweesiza ukuphendula izicelo zabo. Ezinye iisayithi ziphuma phezulu kwi-injini yokukhangela, ngelixa ezinye zifumaneka ngokusebenza ngamaphepha ambalwa. Ukukhangela kokusebenza kwewebhusayithi kuthetha ukwenza indawo yakho ukuya kwizikhundla eziphezulu kwi-injini yokukhangela. Ke, kukhuselekile ukuba i-SEO iseti yamanyathelo okuphucula isikhundla sewebhusayithi kwiziphumo zenjini yokukhangela, ngokwezicelo ezikhethwe kwangaphambili.
Ukuba, kwixa elidlulileyo, i-intanethi ibisetyenziselwa ukukhangela ulwazi, namhlanje imeko yahluke kakhulu. Inani elandayo labasebenzisi be-intanethi, ubuchwepheshe obutsha, kunye nezinye izinto ezininzi ziye zayiguqula i-Intanethi ukuba ibe sisixhobo sokuthengisa esinamandla kunye nendawo yentengiso. Ukunyusa kwi-Intanethi kunokuba luncedo kuyo nayiphi na inkampani enabaphulaphuli abanokubakho abafuna iimveliso ezifanayo okanye iinkonzo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, amawaka abantu akhangela iimveliso zakho mihla le kodwa afumane iimveliso zokhuphiswano lwakho. Kungenxa yokuba abantu abakhuphisana ngokukhawuleza ngokungxama sele bethathe ezona ndawo zibalaseleyo kwiziphumo zophando. Unokubaleka abantu abakhuphisana nabo. Konke okudingayo kukuqalisa ukusebenza kweinjini yokukhangela kunye neSemalt.
Ewe kunjalo, ukwenziwa kweinjini yokukhangela yeyona ndlela isebenzayo ekutsaleni abathengi, kodwa kukho imeko enye: ngoochwephesha kuphela abanokuyizalisekisa. Kwaye inqaku apha alikho kwinto yokuba ukwenziwa kwezinto ngokungafanelekanga kungadla iindleko zokwahlulwa kwiwebhusayithi yakho. Ngamanye amaxesha inani leendwendwe likhulu, kodwa ubuninzi babathengi buhlala bungakhathalelwanga. Ukufumana iziphumo ezilungileyo zonyuselo, kufuneka umisele uluhlu lwezicelo ezikhuthazwayo kunye nesicwangciso sonyuselo. Iingcali zeSemalt zinokwenza izigqibo zobuchule kwiimeko ezahlukeneyo, kwaye ke ungaze uzame nokucwangcisa ngokwakho; endaweni yoko, uthembele inkampani ethembekileyo.
Izisombululo ze-Semalt ze-SEO
Ukusebenza kwe-SEO kubandakanya isicwangciso sokuthengisa esidijithali esibandakanya iindlela ezithile ezenzelwe ukukhuthaza iwebhusayithi okanye uphawu. Iindlela ezinjalo zikuvumela ukuba ufumane ukubonakala ngakumbi kwi-Intanethi. I-Semalt ihlala inikezela ngezisombululo ezigqibeleleyo zokugubungela uluhlu olupheleleyo lwamanyathelo ayimfuneko. Iziphumo ekugqibeleni ziya kuba kukunyuka kokubonakala kwezithuthi kunye nokubonakala kwewebhusayithi. Ezona ziluncedo ziiphulo ze-FullSEO kunye ne-AutoSEO, eziqinisekisa impumelelo ngexesha elifutshane. Ekuqaleni, kuya kufuneka uqwalasele iseti yamanyathelo anikezwe kweziphulo lokukhetha elona lifanelekileyo ngakumbi.
USemalt uqeshe inani lamanyathelo eli phulo, injongo yalo kukubeka iwebhusayithi yakho kwizikhundla eziphambili kwi-injini yokukhangela. Ngoku, kuya kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo kwemigaqo esisiseko ye- AutoSEO. Onke amabakala ephulo ayenzeka kwintsebenzo ethe ngqo yabathengi kunye neqela likaSemalt. Isenzo esijongiweyo ngokungathandabuzekiyo siya kukhokelela kwiziphumo ezifunwayo ukuba ulandela yonke imiyalelo yeengcali zethu ezijolise ekukhuthazeni indawo yakho. I-AutoSEO ibandakanya le misebenzi ilandelayo:
Ukukhetha amagama afanelekileyo;
Ukuqala umkhankaso we-AutoSEO, kuya kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Zonke izinto ezenziwayo ziya kwenziwa ngumhlalutyi wewebhusayithi. Kulungeke kakhulu kuba uthatho-nxaxheba lwakho kukufumana iingxelo zangoku kwisiza. Uhlalutyo luza kujonga ngokucokisekileyo ubume bewebhusayithi ngokwemigangatho ye-SEO. Emva koko, uya kusiwa kwingxelo yokuqala ngemeko yendawo kunye noluhlu lweempazamo ezibonwe ngexesha lohlalutyo. Ezi mpazamo kufuneka zilungiswe ngokukhawuleza ukuze ziye phambili. Injini yethu ye-SEO iya kuphinda iphonononge uhlalutyo kwaye ukhethe amagama afanelekileyo. Isiphumo senkqubo yanda iwebhusayithi yokugcwala.
Inqanaba elilandelayo lomkhankaso we-AutoSEO iya kuba kukukhethwa kweekhonkco ze-Intanethi kunye nokuzifaka kwizibonelelo ezahlukeneyo ze-Intanethi. Umxholo ujongwa ngononophelo kubukho bexabiso le-semantic. Ngaphandle koko, kufuneka idibanise amakhonkco enzelwe ukufakelwa. Yonke inkqubo iphantsi kolawulo lomphathi wethu rhoqo, ngenxa yoko naziphi na izoyikiso kwiwebhusayithi azifakwanga. Umphathi ukwalandelela indawo yeekhonkco kwi-injini yokukhangela kwaye amisele ubungakanani bemithombo efanelekileyo ngaphambi kokufaka amakhonkco.
Usebenzisa ukufikelela kwe-FTP (iProtocol yokuDluliselwa kweFayile) kunye nolwazi oluvela kwingxelo yangaphambili, iingcali zeSemalt zenza utshintsho olufanelekileyo kwiwebhusayithi. Emva kolu tshintsho, ukwenziwa kwesiza kuqala ukuqhubela phambili. Ngalo lonke eli phulo, uSemalt ubeke iliso kwisigxina sokuhlaziywa, wazisa amagama afunekayo. Onke amagama aphambili akhangelwe ukuhambelana nomxholo. Njengoko ubona, ukuthatha inxaxheba kwakho kwinkqubo kuncinci, kodwa uhlala uhlala unolwazi ngayo yonke into eyenzekayo kwisiza. Ngokwexabiso lenkonzo, iphakheji yanyanga zonke ye-AutoSEO iya kubiza $ 99.
I-FullSEO ngumgangatho we-SEO wentsebenzo, iziphumo zoko zifezekiswa ngexesha elifutshane. Ngokufanayo, iinkqubo ezininzi zenziwa ukuphucula ukulinganiswa kwewebhusayithi kwi-injini yokukhangela. Apha, ukwenziwa ngaphakathi nangaphandle kwenziwa phantsi kwesikhokelo sengcali ye-SEO. I-FullSEO yinto eyonyuselweyo ye-SEO enika impumelelo engazange ibonwe ngaphambili kwishishini elikwi-Intanethi. Ngapha koko, eli phulo liya kunceda ukubuyisa bonke abakhuphisana nawe ixesha elide.
Iphulo le-FullSEO liyaqhubeka ngokwamanqanaba. Ukuqalisa inkqubo, kuya kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Uhlalutyo lwesakhiwo sewebhusayithi luqala, kwaye ufumana ingxelo eneenkcukacha. Ukufaka ingxelo kwingxelo, ingcali ye-SEO ichaza eyona semantic. Uhlalutyo lubonisa zonke iimpazamo ezithintela inkqubela phambili. Iimpazamo kufuneka zilungiswe ngokukhawuleza, ke lixesha lokumisela amagama aphambili. Amagama aphambili adlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokwanda kwezithuthi. Ngokufikelela kwe-FTP, ingcali iya kufaka isandla ngokulula kulo lonke utshintsho olufunekayo. Eli nqanaba lentsebenzo yangaphakathi yewebhusayithi.
Okulandelayo, iya kuba kukusebenziseka kwangaphandle. Eli nqanaba libandakanya ukufaka ikhonkco kwizixhobo ze-niche. Ezi zibonelelo kufuneka zibonakalise ngokungqongqo umxholo womxholo wakho. Iwebhusayithi iya kutshintshwa kamsinya emva kokufaka ezi khonkco, ke iingcali ze-SEO zisondela kweli nqanaba ngononophelo. I-Semalt isebenza ngokubonakalayo kunye namaziko amaninzi aqinisekisiweyo, yiyo loo nto iingcali zilazi ngokuchanekileyo ukuba zingena phi amakhonkco okusebenza ngempumelelo. Inkqubo ye-FullSEO ihlala iphantsi kweliso rhoqo kude kube kugqitywa. Uhlala usesikhathini kunye nalo lonke utshintsho olwenziwe kwindawo. Fumana ingxelo eneenkcukacha malunga nokukhula komgangatho kwiwebhusayithi. Ngalo naliphi na ixesha losuku, ungaqhagamshelana nomntu onoxanduva ku-Semalt kwaye ucele inkcazo eyimfuneko.
Akukho sizathu sokukhathazeka xa ukukhuthaza i-SEO kumisiwe ngenxa yesizathu esithile. Nangona iGoogle izakususa zonke i-backlinks kwindawo yogcino lwedatha ngenyanga, irenki iya kuhlala ikwisikhundla esithile. Izikhundla eziwayo aziyi kuba yintlekele, kuba i-FullSEO yenze ishishini. Indawo ekumgangatho wokuhlala ngayo iya kuhlala iphakamile kunangaphambi kokuba uqhube umkhankaso. Kunzima ukumisela iindleko zenkonzo kwangaphambili: Iprojekthi nganye yimeko nganye. Ixabiso lidla ngokuqeshwa emva kokuba ingcali ye-SEO ihlole iwebhusayithi yakho kwaye yenze neziphetho ezithile. Ngapha koko, zonke iindleko ziya kube zichithwe ngokupheleleyo ngengeniso eza kuzisa iphulo.
Ukuqokelelwa kweedatha zohlalutyo yenye yeendlela zokuphucula ukusebenza kwewebhusayithi. I-Semalt idlula zonke iinkqubo zokhuphiswano malunga noku. Umzekelo yinkonzo yokuphicothwa kwewebhu yewebhu- Iinkonzo zokuhlaziya. Uphicotho luyalandelwa ngokudalwa kwengxelo eneenkcukacha, kubandakanya nohlalutyo lweendawo ezikhuphisanayo. Amagama aphambili afanelekileyo ayonyulwa, kwaye kuthathwa uluhlu lweempawu, ngokokujonga kwazo. Kwisiseko samagama aphambili, isiseko se-semantic senziwe ngcono, esiya kusetyenziswa ukukhuthaza iwebhusayithi yakho kwixa elizayo. Nalu uluhlu lweenjongo zokuhlaziya:
Uhlalutyo luqala ukusebenza ngokukhawuleza nje ukuba ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Ukuqokelelwa kwedatha kwenziwa ngokuzenzekelayo. Ngokugqitywa kwengqokelela yohlalutyo, uya kunikwa ingxelo ngokuma kwewebhusayithi yakho kwi-injini yokukhangela. Ngaphandle koko, iisayithi zokhuphiswano ziyahlaziywa, nazo, ke, uya kuba nolwazi oluchanekileyo malunga nemeko ekhoyo yazo zonke iiwebhusayithi zomntu wesithathu. Kuyinzuzo ebalulekileyo. Kwinqanaba lolwakhiwo lwewebhusayithi, yonke imigangatho ye-SEO iya kuthathelwa ingqalelo, ke ngoko, ulwakhiwo lwewebhusayithi luya kutshintshwa ukuze luqhubeke ngakumbi.
Ukuba neakhawunti efanelekileyo ikuvumela ukuba ungeze naliphi na inani leesiza kwikhabhathi yakho. Indawo nganye eyongezelelweyo iya kuhlaziywa. Ingxelo iya kubonisa zonke iziphumo zohlalutyo; Iya kucace gca ukuba ngowuphi amagama aphambili ekufuneka uwasebenzisile. Inkqubo iya kuqinisekisa ukuba amagama aphambili ahambelana nentsingiselo yomxholo. Ukudityaniswa kwala manyathelo ngokungathandabuzekiyo kuya kukhokelela ekwandeni ngokukhawuleza kokuhamba kwewebhu. Ngendlela, unokongeza okanye ucime amanye amagama aphambili kukhetho lwakho.
Inzuzo yokukhetha i-Analytics kukuba iwebhusayithi ihlaziywa iiyure ezingama-24 ngosuku. Inkqubela phambili yayo ilandelwa ngononophelo kwanaxa uphumle kwaye ungenzi ishishini. Ulwazi malunga nabantu okhuphisana nabo baya kukuvumela ukuba uthathe amanyathelo afanelekileyo ngexesha elifanelekileyo, uhlala uhlala kwizikhundla eziphezulu. Awunyanzelekanga ukuba ucinge malunga nokuba zeziphi izinto ezingcono, ii-Analytics ziya kwazisa ukuba yintoni kanye kanye ekufuneka uyenzile. Uninzi lwabantu lusebenzisa isiCwangciso seNkqubo yokuSebenzisa (i-API), ilula kakhulu kuba idatha idityaniswa ngokuzenzekelayo, ekuvumela ukuba uhlale usesikolweni ngalo lonke uhlaziyo. Uhlalutyo lubonelela ngeephakheji zerhafu ezintathu; elowo kubo uneendleko zakhe. Bazi:
USemalt ukwacebisa ngeenkonzo zophuhliso lwewebhu. Le nkqubo yenzelwe ukuphuhlisa indawo yokuthengisa, ukuquka ukuyila amacandelo ayo. Yiyo ngqo-uyilo, ukudityaniswa nokusetyenziswa komntu wesithathu, kunye neNkqubo yoLawulo lweMxholo. Unikelo olongezelelweyo ziimodyuli ezikhethekileyo ze-e-commerce kunye nee-API.
Imveliso yeVidiyo yokuKhuthaza
Ukuqaliswa kweeprojekthi zentengiso ezinkulu ze-intanethi kuhlala kubandakanya izikim zokuthengisa. Semalt bekulindele oko imeko, becebisa ukuba kwenziwe ividiyo ekhethekileyo. Ividiyo inomlinganiswa okhuthaza ukubonisa zonke izibonelelo zenkampani entsha. Inkqubo "yeMveliso yeVidiyo yokuKhuthaza" inokuphunyezwa ngeendlela ezimbini: ngetemplate nangokhetho lwakho. Kwinguqulelo nganye, amaxabiso ahlukile. Ngokwamava eengcali, iipesenti ezingama-50 zempumelelo kwishishini elikwi-Intanethi kuxhomekeke kwinkcazelo efanelekileyo yenkampani. Ividiyo yethu iphakamisa ipesenti yempumelelo ephezulu kakhulu.
Ke senze ushwankathelo olufutshane lwenkampani yaseSemalt, kodwa kholwa, sisiqithi se-iceberg ngokuthelekisa zonke izibonelelo ezinokuthi ziziswe yinkampani. Ukuphuculwa kwewebhusayithi ye-SEO kungaphezulu kokukhethwa kwegama elingundoqo. Yinzululwazi epheleleyo efumanekayo kuphela kwiingcali. Funda amabali ethu; Uya kufumanisa ukuba abo babezama ukwenza izinto ngaphandle kukaSemalt babecela uncedo kuthi. Kwaye sasidla ngokubasindisa. Sukuchitha ixesha lakho; endaweni yoko, qalisa ukukhula ngoSemalt, sisityebi, kwaye wonwabe. Silinde wena!